စောစီးစွာ ကြီးကောင်ဝင်တာနဲ့ အဝလွန်တာ ဆက်စပ်မှု ရှိသလား - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » မိဘများအတွက်လမ်းညွှန် » စောစီးစွာ ကြီးကောင်ဝင်တာနဲ့ အဝလွန်တာ ဆက်စပ်မှု ရှိသလား
စောစီးစွာ ကြီးကောင်ဝင်တာနဲ့ အဝလွန်တာ ဆက်စပ်မှု ရှိသလား
ရေးသားသူ Dr. Thiha Phyo Myint ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win
မိန်းကလေးငယ်တွေမှာအပျိုဖော်စောဝင်တာဟာအဝလွန်တာကြောင့်အဓိကဖြစ်တယ်လို့လေ့လာမှုတွေကဆိုပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေမှာတော့ဒီလိုမျိုးဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့သက်သေသာဓကတွေမရှိပါဖူး။အဆီဆဲလ်တွေကနေleptinဆိုတဲ့ဓာတ်တမျိုးကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ကြီးကောင်ဝင်ဖို့အတွက်ကလေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာleptinဓာတ်လုံလောက်စွာရှိဖို့လိုပါမယ်။ဒါကြောင့်အဝလွန်တဲ့မိန်းကလေးတွေ (leptinဓာတ်ပမာဏများနေမယ့်မိန်းကလေးတွေ)ဟာအပျိုဖော်ဝင်တာစောဖို့အခွင့်အလမ်းများနေပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပါဖူး။အဆီဆဲလ်တွေက estrogen ဆိုတဲ့မဟော်မုန်းကိုလည်းထုတ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီဟော်မုန်းကရင်သားကြီးထွားတာနဲ့ကြီးကောင်ဝင်တာကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်အဝလွန်တဲ့မိန်းကလေးတွေဟာစောစီးစွာရင်သားကြီးလာပြီးဓမ္မတာစလာတဲ့အချိန်ကလည်းပုံမှန်ထက်ပိုစောနေပါလိမ့်မယ်။
အပျိုဖော်ဝင်တာစောတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေပိုများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်မိဘကမှကိုယ့်သားသမီးကိုကင်ဆာမဖြစ်စေချင်ကြပါဖူး၊ဟုတ်တယ်မလား။ကြီးကောင်ဝင်တာစောတဲ့ကလေးတွေဟာလိင်ကိစ္စတွေနဲ့လည်းစောစောစီးစီးထိတွေ့မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပါဖူး။အဝလွန်ခြင်းကဆီးချို၊သွေးတိုး၊နှလုံးရောဂါစတဲ့ ပြဿနာတွေကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။
Hello Health Groupသည် ဆေးပညာအကြံပြုချက်များ၊ ရောဂါရှာဖွေအတည်ပြုချက်များနှင့် ကုသမှုများမပြုလုပ်ပေးပါ။
အဓမ္မပြုကျင့်ခံရပြီးရင် ကိုယ်ဝန်ရမသွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
အမျိုးသမီးတွေလုပ်သင့်တဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ၅ ခု
သင့်ကလေးကို မဖြစ်မနေ ပြောပြထားရမယ့် အချက်(၇)ချက်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း ကိုယ်အလေးချိန်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇနျနဝါရီ 17, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇနျနဝါရီ 17, 2018
1. Burt Solorzano CM, McCartney CR. Obesity and the pubertal transition in girls and boys.
Reproduction (Cambridge, England). 2010;140(3):399-410. doi:10.1530/REP-10- 0119.
2. The Link Between Childhood Obesity and Early Puberty.
http://www.parenting.com/article/the-link- between-childhood- obesity-and- early-puberty.
Accessed February 22, 2017.
3. Early Puberty: Causes and Effects. https://www.scientificamerican.com/article/early-puberty-causes-and- effects/. Accessed February 22, 2017.
4. Obesity and Early Puberty: What&#39;s the Risk?.
သင်သတိမထားမိတဲ့ ဒီ အရာတွေက သင့်ကလေးအသားအရေကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ။
ရေနွေးပူလောင်တဲ့ ကလေးတွေကို ဘယ်လိုပြုစုပေးမလဲ
ကိုယ့်ကလေး အ၀မလွန်အောင် ဘယ်လိုပြုစုစောင့်ရှောက်မလဲ
သင့်ကလေးမှာ မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်တခုခု ရှိနေပြီလား